Columnar स्याउको रूख Ostankino: वर्णन, खेती र हेरविचार
तपाईं columnar स्याउ "Ostankino" को रूपमा यस्तो रूख कस्तो थाहा छ? हरेक समय कुनै बगैंचामा बारेमा, हाम्रो मस्तिष्क एउटा सुन्दर बगैचा षड्यन्त्र, रसीला चदंवा संग रूखहरू धेरै संग लगाए छ जो एक तस्वीर ड्र भन्छन्। त्यसैले यो पुरानो दिन थियो। अब स्थिति परिवर्तन भएको छ, र वैज्ञानिकहरू यस्तो deduced छन् स्याउ रूखहरू, को किसिमहरु जो लाग्न सानो ठाउँ, तर एकै समयमा एक उत्कृष्ट बाली प्रदान गर्नुहोस्। यस्तो प्रजातिहरू, स्याउ प्रशोधन र रोपण सुझावहरू मा जानकारी यस लेखमा लागि संकलित छन्।
काठ को यस प्रकारको को कथा एकदम सरल छ। यो सबै गर्दा केन्द्रीय मजबूत ट्रंक फल धेरै छ, कसैलाई अनौठो स्याउको रूख, कुनै पनि पक्ष शाखा छैन जो देखे, क्यानाडा मा सुरु भयो। होने विस्तृत यस्तो रूख अध्ययन, वैज्ञानिकहरु आधारमा यसलाई लिएर, र विभिन्न किसिमहरु धेरै ल्याए। Columnar स्याउ "Ostankino" एक यस्तो प्रजाति हो। को माली उनको साथ काम अगाडी, अधिक त्यो मन पर्यो। आखिर, काठ को मुख्य लाभ यो फसल क्रप कुनै पनि रकम गुमाउने बिना साइटमा स्पेस बचाउँछ छ।
औसत मा, प्रजाति को रूखहरू मात्र आधा मीटर को मुकुट चौडाई मा दुई मीटर को एक उचाइ गर्न बढ्न। रूख एक मुख्य ट्रंक र बिल्कुल कुनै पक्ष शाखा छ। फल पकाना धेरै चाँडै र रोपण पछि एक वर्ष भित्र, के तपाईंले बाली काट्ने गर्न सक्नुहुन्छ। Columnar रूख हुन सक्छ:
अक्सर यो रूख खुला क्षेत्रमा बढ्न र पट मा छैन। र हुनत विगतमा यी बिरुवाहरु रूखहरू प्रजनन लागि मात्र विशेष नर्सरी पाउन सकिन्छ, अब तिनीहरूले किन्न र जो कोहीले राख्न सक्नुहुन्छ। स्याउको रूख "Ostankino", तल हामी प्रस्तुत जो को खुलासा, रूखहरू को प्रजाति को सबैभन्दा लोकप्रिय किसिमहरु मध्ये एक छ। स्याउ र दुवै घरेलू र विदेशी उत्पादक आकर्षित को सुविधाजनक फारम को स्वाद।
Columnar स्याउ "Ostankino"
यो विविधता रूस मा नस्ल थियो, र धेरै माली देश खोजे-पछि भएको छ। एउटै यस्तो रूख द्वारा विशेषता छ? Columnar स्याउ "Ostankino" एक अर्ध-बौना प्रजाति,2मीटर को एक उचाइ गर्न बढ्न सक्छ। यो एक स्तम्भ आकारको छ। थालेका छन् जो, विशेष गरी फल को उच्च घनत्व विचार ग्रेड शीर्ष गर्न धेरै तल बाट गाँसिएको गर्न। साथै, स्याउको रूख पात को एक ठूलो संख्या द्वारा मान्यता प्राप्त गर्न सकिन्छ। औसत मा, एक रूख फल को सोह्र दस बीच र किलोग्राम उत्पादन, तर ट्रंक सुरक्षित यस्तो लोड सामना। स्याउ को जीवन को अवधि दस पन्ध्र वर्ष हो। , वृद्ध पेड कमजोर बन्न, बाली काट्ने निकै कम छ, र यो बगैचा को कायाकल्प सुरु गर्न एक संकेत हो।
स्याउ आफूलाई सानो र कुनै अधिक एक सय र पचास ग्राम वजन। राउन्ड र अलिकति चपटे फल बैजनी-रातो पक्ष संग एक पहेंलो-हरियो छाला द्वारा विशेषता। मिठास सुझावको साथ अमिलो फल स्वाद र शरीर सेतो र रसदार छ। किनभने यसको गुणस्तर स्याउ को अक्सर क्यानमा लागि प्रयोग गरिन्छ।
लाभ र बेफाइदा
स्याउको रूख हामी ध्यान प्रतिक्रियाहरू अध्ययन जो "Ostankino", केही लाभ छ। यस्तो निष्कर्ष मालिकहरूको बयान आधारित गरेका छन्:
रूखहरू तपाईं भूमि को एक अपेक्षाकृत सानो षड्यन्त्र मा बिरुवाहरु को एक महत्वपूर्ण राशि राख्न अनुमति दिने, एक कम्प्याक्ट आकार छ;
सानो आकार को जरा एक पट मा एक रूख बढ्न अनुमति दिन्छ;
विभिन्न चिसो धेरै प्रतिरोधी हो, त्यसैले यसलाई वसन्त र शरद ऋतु मा रोपेर गर्न अनुमति दिएको छ;
जो यो सम्भव बनाउँछ, स्याउ शायद बिरामी थप रासायनिक प्रशोधन बिना सुन्दर फल धेरै छ;
पनि ovary फल "Ostankino" स्याउ cultivar प्रकारका तिनीहरूलाई को एक ठूलो संख्या, क्रप गुणस्तर प्रभावित छैन समयमा सूर्यका पर्याप्त रकम को अभाव मा।
यो बिरूवा किन माली बीच यति लोकप्रिय छ माथि बाट यो स्पष्ट हुन्छ। हुनत त्यहाँ पनि केही नकारात्मक समीक्षा हो:
बिरुवा को उच्च लागत;
सीमित जीवनकालमा। माली मा सात वा आठ वर्ष, बाली काट्ने थप अभाव हुन्छ भन्ने तथ्यलाई द्वारा विरक्तलाग्दो, र यो जवान मा पुरानो रूख प्रतिस्थापन गर्न आवश्यक छ।
रोपण र हेरविचार
तपाईं एक columnar स्याउ "Ostankino" रूपमा रूख रोपण, जान्नु आवश्यक के? त्यहाँ बोट यस प्रकारको को खेती को लागि केही सिफारिसहरू हो:
बिरुवा चयन ध्यान आफ्नो उपस्थिति अध्ययन, यो जरा जस्ताको तस्तै हुनुपर्छ, छैन क्षतिग्रस्त हुनुपर्छ, शंकास्पद कीराहरू, र रूख नै ताजा छ;
एक भागमा रूख रोपण सही बीच तिनीहरूलाई 1 मीटर भन्दा कम हुनु हुँदैन दूरी एक ठूलो संख्या रोपण मा बिरुवा स्थिति;
रोपण लागि खाल्टो digging, मूल सिस्टम को आकार विचार, यो प्वाल मा amply हुनुपर्छ;
स्याउको रूख पनि उर्वर माटो मा बढ्न रुचि, र पहिलो बनाउन-अप रोपण अघि गर्नुपर्छ रूपमा नियमित माटो शह;
आवश्यक रूख टीन, यो न्यानो पानी रक्षा गर्न लिन सिफारिस गरिएको छ;
यस्तो रूख मुकुट हराइरहेको छ तापनि, तर तपाईं टिप खोज्न आवश्यक, रूख को आकार निम्नानुसार: यदि यो भ्रष्ट हुन्छ, त्यसपछि यसको स्थान सबैभन्दा स्वस्थ चयन र बाँकी मेटाउन जो दुई वा तीन नयाँ बढ्नेछ मा;
तिनीहरूले आवश्यक पार्श्व शाखा को उपस्थिति तुरुन्तै हटाउन र कट lubricated वार्निश।
Fertilizing र किरा नियन्त्रण
स्याउ प्रशोधन तपाईंले समस्या नोटिस घटनाको आवश्यक छ। रोग प्रतिरोध कारण, यो ग्रेड निरन्तर स्प्रे गर्न आवश्यक छैन। आवश्यक छ भने, आवश्यकता समस्या आधारमा सिफारिस मानक हालतमा प्रयोग गर्न। को लाउने अर्को कुरा। यो लगातार बाहिर हुनुपर्छ। वसन्त मा, तपाईं मल संग भूमि खाद गर्न सक्नुहुन्छ। प्रति बोट 2.5-3.5 किलो आवेदन दर। रूपमा ताजा को जरा बाल्न मात्र गत वर्ष गरेको rotted मल आवश्यक प्रयोग। एक रूखमुनि 50-80 G - छलफल यूरिया रूखहरू खुवाउने एउटा ठूलो तरिका हो। कुनै 100 भन्दा बढी एकल स्याउ रूखहरू लागि पदार्थ को G - र गर्मी मा पोटासियम-फस्फोरस मल प्रयोग गर्न सिफारिस गरिएको छ।
अन्त्यमा म यस प्रकारको साइटमा स्पेस छोटो भएका माली को लागि एक वास्तविक मुक्तिको बन्न थप्न चाहन्छु। एक धनी बाली र बर्तन मा रूखहरू रोपण को संभावना यो क्रमबद्ध पनि अधिक आकर्षक बनाउन।
लसुन को वसन्त मा fertilizing
आफ्नो साइट मा leeks रोपण
उच्च-yielding मरिच रोटी
बालकनी फूल बक्से लागि मिलाउँदै। आफ्नो दृष्टिकोण र सही नियुक्ति
उत्पादन को मौका लागत के छ
टी-शर्ट को रूपमा आफ्नै हातले एक पोशाक बनाउन
Zherebtsova लेखक Pauline वी .: जीवनी
हरियो अनाज: व्यञ्जनहरु, उपयोगी गुणहरू
लामो बाक्लो मान्छे। केटाहरूको लागि लामो कपाल
एक सामान्य विवरण र दक्षिण डकोटा को एक संक्षिप्त इतिहास
प्रसब समयमा भ्रूण दुःखको
शिखर विल्हेम: छोटो जीवनी
Floromansiya - रंग मा प्रेतविद्यासम्बन्धी वा कसरी आफ्नो भाग्य जान्न